इटालियन पर्यटन विज्ञको सहयोगमा मेलम्चीका पर्यटकीयस्थलको नक्साङ्कन
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यहाँका मुख्य पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र तथा पदमार्गहरुको पहिचान गरी नक्साङ्कन गरेको छ।
पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको इटालीयन संस्था स्याटसँग मिलेर गरिमा भोयज ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा. लि को सहजीकरणमा मेलम्ची नगरपालिकामा पर्यटन पदमार्गको नक्साङ्कन गरिएको ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक रबिन्द्र अर्यालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गत मंसिर ६ देखि १२ गतेसम्म इटालीका पर्यटन विज्ञ र मेलम्ची नगरको वर्किङ्ग ग्रुप मिलेर पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र र पदमार्गहरुको नक्साङ्कन गरिएको हो। उक्त समयमा मेलम्ची नगरपालिकाको वर्किङ्ग ग्रुपलार्इ ट्रेनिंग समेत दिएको थियो।
उक्त कार्यक्रम सफल बनाउन मेलम्ची पर्यटन विकास समितिका सदस्य बालकृष्ण देउजाको भूमिका महत्वपुर्ण रह्यो। देउजा राजनीति संगसंगै मेलम्ची नगरमा पर्यटन र कृषिको माध्यमबाट मेलम्चीलाई समृद्धितर्फ कसरी उन्मुख गराउन सकिन्छ भन्ने विशेष चासो राख्छन्।
यस क्रममा काठमाडौंबाट २२ किमीको दुरीमा रहेको भोटेचौरको पातले छाँगो, चमेरे गुफा लगायत अन्य चारवटा महत्वपुर्ण गुफाहरुको नक्साङ्कन गरिएको छ। नगरपालिकाको तपचुली डाँडा अर्को आकर्षणको केन्द्र हो। यहाँ इलामको कन्याम बिर्साउने चिया बगान रहेको छ। चिया बगानबाट केहि समयको यात्रापछि हैबुंग हुदै चिसापानी डाँडामा पुग्न सकिन्छ। चिसापानीबाट चारैतिर मनोरम हिमालका दृश्यहरु देख्न सकिन्छ।
त्यसपछि थाना भन्ज्याङ हुँदै थाना भन्ज्याङगढी पुग्न सकिन्छ। गढी पृथ्वीनारायण शाहले युद्ध लडेको ठाँउ हो। जहाँ त्यतिबेला सेनाहरुले सुरक्षा किल्ला कसरी निर्माण गर्थे भन्ने कुराको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ त्यसैले यो गढी संरक्षणको लागि नगरपालिकाले कुनै पनि कसुर बाकि नराख्ने र चाडैनै यसलाई पुरातत्व बिभाग संग समन्वयन गरी ऐतिहासिक कुराको खोजि गरिने कुरा मेलम्ची नगरका मेयर डम्बर अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी हिन्दु र बौद्धको साझा धौले मन्दिर पनि पहिचानमा परेको छ। जहाँ बुद्ध जयन्ती र जनैपुर्णिमामा ठुलो मेला लाग्छ। यसैगरी ज्यामिरेको गुफा डाँडा अर्को आकर्षणको केन्द्र हो, जहाँ निकट भविष्यमै जलवायु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समेत आयोजना हुने चर्चा छ।
पदमार्गको पनि नक्साङ्कन
नगरपालिकाले पर्यटकीय केन्द्रको अलावा पर्यटकीय पदमार्गको नक्साङ्कन गरेको छ। पहिलो दिन मेलम्ची नगरपालिकामा वोर्किङ्ग ग्रुप लाइ ट्रेनिंग दिएको थियो। दोस्रो दिन बिहान वोर्किङ्ग ग्रुप का टोलि, स्याट टिम, गरिमा भोयज टिम र मेलम्ची नगरको टिमसहित स्थानीयको सहभागितामा भोटेचौरको सुरक्षा डाँडाबाट बाट सुरु गरिएको पदयात्रा चमेरे गुफा(तपचुली डाँडा(गुरुङ गाउँ हुँदै चिसापानी पुग्यो। तेस्रो दिन पार्टी भन्ज्याङ(थानाभन्ज्याङ(घौले डाँडा हुदै सिन्धुकोटमा पन्चे बाजासहित उक्त टोलीलाई स्वागत गरेको थियो । त्यससपछी सुलीकोट(तालामाराङ(माने भन्ज्याङ–सिग्देल गाउँ एकीकृत बस्ती हुँदै मेलम्चीसम्मको पैदलयात्रा गरी नक्सांकन गरियो। यो पदमार्गको १०१ भनेर नामाकरण गरिएको छ।
अर्को पदमार्ग मेलम्ची–गुफा–चाङखुसम्म २०१ भनेर नामाकरण गरिएको छ। गुफा–चाङ्खु हुँदै प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल पाँचपोखरी जुगल हिमाल र दोर्जे लाक्पा हिमालको यात्रा गर्न सकिन्छ भने मेलम्ची बाट हेलम्बु, लाङ्गटांङ्ग रास्ट्रीय निकुन्ज हुदै लाङटाङ हिमालसम्म जान सकिन्छ।
मेलम्ची नगरपालिका प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको छ। नगरपालिका पर्यटकहरु लोभ्याउने अनगिन्ती हिम श्रृङखलाहरु, मठ(मन्दिर, गुफा, गुम्बा, झरना, होम स्टे, एकीकृत बस्तीहरु रहेका छन्।
अध्ययन भ्रमणमा जाँदा मेयरले गरेका थिए आग्रह
यसअघि मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बर बहादुर अर्याल सहितको टोलीले इटालीको त्रेंतिनो प्रदेशको रोभेरेतो नगरपालिकाको अध्ययन भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा इटालीमा पर्यटनसम्वन्धी काम गरिरहेको संस्था स्याटसंग पर्यटन विकासका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेपछि पर्यटन पदमार्गको सम्भावनाको अध्ययनका लागि उक्त संस्थाबाट ९ जना पर्यटन विज्ञहरु नेपालमा आएका थिए। उनीहरुकै सहयोगमा र गरिमा भोयज को सहकार्यमा पदमार्गको नक्साङ्कन गरिएको हो।
यससंगै यो रुट मा जि.पि.एस. ट्रयाक पनि गरिएको छ। जसको कारणले नयाँ पर्यटकको लागि पनि सजिलै बाटो पहिचान गर्न सकिने छ। भने सबै रुटमा रातो र सेतो रंग लगाएको छ। यो अन्तरराष्ट्रिय रुपमा बाटो पहिचान गर्ने चिन्ह हो । जसले स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकलाई सहज हुने बालकृष्ण देउजा ले जानकारी दिए ।
गरिमा भोयज मार्फत पर्यटन मार्ग को लागि एक समूह स्थापना गर्दै नेपाल र नेपालका पर्यटकीयस्थलको पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षणअन्तर्गत नयाँ ट्रेकिङ मार्गको म्यापिङ र पहिचान गरी स्थानीय पर्यटनमा फोकस गर्ने र मेलम्ची संगसंगै अन्य क्षेत्रमा पनि विकास गरिने कुरा स्याटका प्रमुख अन्ना फंकिनीले जानकारी दिए।